सुशान्तको मृ*त्यु गर्नुको प्रमाण म संग छ भन्दै आज आफ्नै साथी पुगे प्रहरीकोमा, प्रेमिकासंग पनि झगडा भएको खुलासा ! – Online Nepal
सुशान्तको मृ*त्यु गर्नुको प्रमाण म संग छ भन्दै आज आफ्नै साथी पुगे प्रहरीकोमा, प्रेमिकासंग पनि झगडा भएको खुलासा !
June 28, 2020 463
उनी मानसिक रुपमा विरामी भएको, डि प्रेशनमा गएको लगायतका अनुमान लगाइएको छ । साथै प्रेमिका रिया चक्रवतिसंगको झगडा भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । प्रहरीले रियासंग पनि वयान लिइसकेको छ । सुशान्तका एक जना साथी संदीप सिंह अचानक प्रहरी कार्यालय पुगेर सुशान्तको निधनको कारण मलाई थाहा छ भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् ।उनले त्यसवारेमा प्रहरीलाई जानकारी पनि दिएको बताएका छन् । प्रहरी कार्यालयवाट बाहिर निस्केका उनलाई तत्काल सञ्चारकर्मीले घेरेका थिए । उनले आफुसंग भएको प्रमाण प्रहरीलाई दिएको र संचारकर्मीका माझमा भने समय आएपछि मात्र त्यसवारे खुलाउने बताएका छन् ।
Prevभर्खरै भुटानले पानी रोकिदिएपछि भारतमा हाहाकार, मोदीले भुटानसँग पनि सम्बन्ध बिगार्‍यो ! (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य बनायो नयाँ रेकर्ड , हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?